माधव नेपालको दुई वर्ष पुरानो आँसु बेचेर उल्लु बनाउन खोज्ने मिडिया – MySansar
के तपाईँले दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले धोका दिएको भन्दै एमाले फुटाएकोमा पछुतो मानेर नेता माधवकुमार नेपाल रोएको फोटो कुनै मिडियामा वा सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएको छ? त्यो सही होइन है। माधव नेपाल रोएका पक्कै हुन्, तर त्यो दुई वर्षअगाडिको भिडियोको कुरा हो। दुई वर्ष पुरानो आँसु बेचेर मिडियाले उल्लु बनाउन खोजेको मात्रै हो। यो बारेमा नेपालफ्याक्टचेकमा प्रकाशित तथ्यजाँच- के हो माधवकुमार नेपाल रुँदै गरेको भाइरल फोटोको वास्तविकता?
यो गएको साता सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले आयोजना गरेको फ्याक्ट चेक सम्बन्धी ट्रेनिङको फोटो हो। यसमा साउथ एसिया चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी र मैले फ्याक्ट चेक कसरी गर्ने भन्ने बारे सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान बाँडेका थियौँ। त्यसैका एक सहभागी श्यामसुन्दर पुडासैनीले यो फ्याक्टचेक गरेका हुन्।
गएको शनिबार (२८ अगस्त २०२१) पेशागत महासंघले ललितपुरमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यही कार्यक्रमको समाचारसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको रुँदै गरेको फोटो भाइरल भएको हो।
भाइरल समाचारको मुख्य स्रोत
भाइरल समाचारको मुख्य स्रोत ब्रेकएनलिङ्कसको नेपाली संस्करणमा राखिएको यो समाचार हो- ‘माधव नेपालले रुँदै भने: ‘पछिबाट धकेल्ने साथीहरूले आँखै अघि छाेडे’
ब्रेकएनलिङ्कसको चलाखी यहीँबाट देखिन्छ। अनुहार मलिनलाई ब्राकेटमा रुँदै लेखेर समाचार बनाइएको छ। अनि रोएको जस्तो देखिने फोटो राखिएको छ। यही फोटोलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले पार्टी फुटाएकोमा नेता माधवकुमार नेपालले पछुतो मानेको अर्थमा प्रयोग गरेका छन्। अरु केही अनलाइनहरुले पनि यही फोटो र समाचार साभार गरेका छन्।
अर्थात् दुई वर्ष पुरानो भिडियोको स्क्रिनसट राखेर मिडियाले पाठकलाई उल्लु बनाएछ।
2 thoughts on “माधव नेपालको दुई वर्ष पुरानो आँसु बेचेर उल्लु बनाउन खोज्ने मिडिया”
Pingback: माधव नेपाल रोएको खबरमा मिडियाले गरेको नयाँ ‘ट्विस्ट’ – MySansar